ဆိုးလ် ၊ မတ် ၁၈ Wonder Girls ကေပေါ့ပ်အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်ဆူမီက သူမရဲ့ပထမဆုံးတစ်ဦးတည်း ကမ္ဘာလှည့်ခရီးစဉ်အစီအစဉ် ဖြစ်တဲ့ ''Warning'' အစီအစဉ် ရိုက်ကူးရာမှာ ကနေဒါနိုင်ငံ တိုရွန်တိုမြို့မှာရှိနေစဉ်အတွင်း အိမ်နေရင်းကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ် စားသောက်ပုံတွေကို အင်စတာဂရမ်မှာ တင်ပြီး ပရိတ်သတ်တွေကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
IN: Entertainment BY: ထက်ထက်အောင် 19 Mar, 2019
ဟောလိဝုဒ်၊ မတ် ၁၈ အမေရိကန်မှ နာမည်ကျော် စူပါမော်ဒယ်၊ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူနဲ့ ကိုယ်ပိုင်စွန့်ဦးတီထွင်သူ ကိုင်လီဂျန်နာ (၂၁)နှစ်ဟာ ကမ္ဘာ့အသက်အငယ်ဆုံး ကိုယ့်ထူးကိုယ်ချွန် ဘီလျံနာဖြစ်လာကြောင်း Forbes မဂ္ဂဇင်းရဲ့ဘီလျံနာစာရင်း ထုတ်ပြန်မှုကနေ သိရှိရပါတယ်။ သူမဟာသက်တမ်းသုံးနှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကိုင်လီတံဆိပ်အလှကုန် လုပ်ငန်းကနေဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၃၆ဝ ခန့်ကို မနှစ်က ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ထူထောင်သူ ဇူကာဘတ်ရဲ့ အသက် (၂၁)နှစ်အရွယ်က ဝင်ငွေထက်များစွာ ပိုမိုနေပါတယ်။ ဇူကာဘတ်ဆိုရင်တောင် အသက်(၂၃)နှ...
IN: Regional BY: MO 19 Mar, 2019
ပြည်ပအစေ့ထုတ်ပြောင်းများ စိုက်ပျိုးပြီး တရုတ်ဈေးကွက် ပိုမိုတင်ပို့နိုင်ခြင်းကြောင့် တောင်သူများနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များ အကျိုးအမြတ် ပိုမိုရရှိလာကြ
IN: Business BY: MTH 19 Mar, 2019
သင်္ကြန်ကာလအတွင်း ကျုံးပတ်လည်တွင် ကျူးကျော်ဈေးနှင့် အရက်၊ ဘီယာ ရောင်းချခြင်းများကို အထူးတရားရုံးသို့ တင်ပို့ အရေးယူသွားမည်
IN: Regional BY: KSA 19 Mar, 2019
IN: Political BY: MP, HWA 19 Mar, 2019
IN: Political BY: HWA 19 Mar, 2019
လူထုတွေ့ဆုံပွဲတွင် ပုဂ္ဂလိကပြဿနာများ တင်ပြတိုင်ကြားသည်ထက် နိုင်ငံနှင့်ဆိုင်သည့် မေးခွန်းများကို မေးမြန်းကြရန် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ပြောကြား
လွှတ်တော် ရပ်နားပြီဖြစ်သော်လည်း ခြေဥပြင်ဆင်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီ အစည်းအဝေးများ ဆက်ရှိ
လွိုင်ကော် ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ် ကိစ္စ ငါးပွင့်ဆိုင်တွေ့ကာ ပြေလည်သည်အထိ ညှိနှိုင်းပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရ ကတိပေးထား ဟုဆို
ကုလားတန်မြစ်အတွင်း တံတားဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း တင်ရေယာဉ်ကို AA တိုက်ခိုက်၊ စက်ခန်းမီးလောင်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ထမ်းများ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်
ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၈ နောင်ချိုမြို့နယ်တွင် ပြည်သူပူးပေါင်းပါဝင်မှု ဖြင့် လူထုအခြေပြု စောင့်ကြပ်ကြည့် ရှုသတင်းပို့စနစ် သတင်းပေးပို့ချက် အရ တရားမဝင်သစ်လုံးများနှင့်ပိ တောက်ခွဲသားများ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ ကြောင်း သစ...
IN: Regional BY: AA 19 Mar, 2019
မန္တလေးကို စမတ်စီးတီးအလားအလာကောင်းသော မြို့အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရပြီးနောက် နည်းပညာအသုံးပြု၍ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေ
တိုက်ပွဲများကြား ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသော တအာင်း (ပလောင်) တိုင်းရင်းသားများ ပြန်လည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် လားရှိုးမြို့၌ ဆန္ဒထုတ်ဖော်
အရေးပေါ် နှလုံးသွေးကြောချဲ့ ကုသမှု ခြောက်နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားနှင့် နှလုံးသွေးကြောပိတ်ရောဂါ ပညာပေးရက်သတ္တပတ် မန္တလေးမြို့၌ ကျင်းပ
IN: Business BY: M Bwe 19 Mar, 2019
IN: Business BY: ATK 19 Mar, 2019
တက္ကသိုလ်ဆရာ၊ ဆရာမများ နေထိုင်ရန် ချထားပေးသည့် အခန်းများကို ပြန်လည် ငှားစားထားပါက အရေးယူသွားမည်
နိုင်ငံတကာအဆင့်အတန်းမီ အင်တာနေရှင်နယ်ဆေးရုံကြီးများ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းဖြင့် ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ ပြည်ပမှ လာရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများအတွက် ကျန်းမာရေးအရ လုံခြုံစိတ်ချရမှုရရှိစေနိုင်မည် ဟုဆို
အာဆင်နယ်ကွင်းလယ်လူ အိုဇေးလ်သည် နွေရာသီတွင်ပြုလုပ်မည့် ၎င်း၏မင်္ဂလာပွဲ တွင် အသိသက်သေပြုလုပ်ပေးရန် တူရကီ သမ္မတအာဒိုဂန်ကို ဖိတ်ကြားခဲ့သည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့...
IN: Sport BY: KKW 19 Mar, 2019
အက်ဖ်အေဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ်တွင် ဘရိုက်တန်နှင့် မန်စီးတီး ရင်ဆိုင်ရမည် တစ်ရာသီအတွင်း ဆုဖလားလေးလုံး ရယူနိုင်ရန် ဘာနာဒိုဆေးလ်ဗား ရည်မှန်း
မိမိလက်ထက် အဆိုးရွားဆုံး ကစားပုံဖြစ်ကြောင်း နည်းပြဆိုးလ်ရှားဝန်ခံ၊ နိုင်ငံတကာပွဲများ ကြားဖြတ်ဝင်လာခြင်းက အထောက်အကူဖြစ်နိုင်ဟု ပြောဆို
IN: World News BY: M Bwe 19 Mar, 2019
အိုင်အက်စ် ခြေကုပ်စခန်းများအား ဆီးရီးယားတပ်များက အပြင်းအထန် တိုက်ခိုက်၊ အိုင်အက်စ် ၃၂ ဦး သေဆုံး
ဟူသီသူပုန်များက ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့် ယူအေအီးနိုင်ငံများသို့ တိုက်ချင်းပစ် ဒုံးကျည်သုံးကာ ပစ်ခတ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်
နယူးယောက် မာဖီးယားဂိုဏ်းခေါင်းဆောင် နေအိမ်ရှေ့တွင် ပစ်သတ်ခံရ
ရုရှားနှင့် အမေရိကန် အာကာသယာဉ်မှူးများ နိုင်ငံတကာ အာကာသစခန်းသို့ အောင်မြင်စွာ ရောက်ရှိသွားခဲ့
နယူးဇီလန်နိုင်ငံ ခရစ္စချခ်ျမြို့ရှိ ဗလီများတွင် သေနတ်ပစ်မှုဖြစ်ပွား ၄၉ ဦးသေဆုံး၊ သံသယရှိသူလေးဦး ဖမ်းဆီးထား
ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၈ တိုင်ကြားခံရသောရန်ကုန်စည်ပင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ငါးဦးကို စိစစ်ခဲ့ရာ သတ်မှတ်အရည်အချ...
IN: Life BY: TTMT 19 Mar, 2019
စစ်ကိုင်း၊ မတ် ၁၈ သီတဂူကမ္ဘာ့ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များ၏ အဓိပတိ၊ အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု၊ ရွှေကျင်နိ ကာယဥပဥက္ကဋ္ဌတွဲဖက်ရွှေ...
IN: Life BY: DW 19 Mar, 2019
စင်ကာပူ၊ မတ် ၁၈ မြန်မာအိမ် ဖော်ကို နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုဖြင့် တရား ရင်ဆိုင်နေရသော လင်မယားကို စင်ကာပူ...
IN: Life BY: M Bwe 19 Mar, 2019
မြဝတီ၊ မတ် ၁၇ ကရင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့ ရွှေမြစန္ဒီအိမ်ရာစီမ...
IN: Life BY: KKTM(MWD) 18 Mar, 2019
အောင်လံ၊ မတ် ၁၇ မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး အောင်လံမြို့နယ်အတွင်း ရှိ ကျေးလက်စာကြည့်တိုက်များ တွင် စာဖတ်သူမ...
IN: Life BY: HT(AL) 18 Mar, 2019
ပုလဲ၊ မတ် ၁၇ အညာဒေသ နတ်ပွဲများတွင် ထင်ရှားသည့် ကိုကြီးကျော်နတ်ပွဲ (သို့) ကူနီနတ်ပွဲအပြီးတွင် ဆိုင်...
IN: Life BY: DW 18 Mar, 2019
IN: Others BY: KTS 19 Mar, 2019
ဧပြီ ၁ ရက်မှစ၍ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများ ပင်ရင်းဈေး ကျပ် ၁ဝဝ ဖြင့် ရောင်းချမည် ဖြစ်သော်လည်း ဈေးကွက်ထဲတွင် လက်လီဈေး ကျပ်၂ဝဝ အထိရောင်းချရန် စီစဉ်နေ
IN: Others BY: TTHL 19 Mar, 2019
IN: Others BY: NT 19 Mar, 2019
ပေါက်မြို့နယ်ကျေးရွာတွင် စက်ရေတွင်းနှင့် ဆက်စပ် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေမှု တာဝန်ရှိသူများ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး